China wafuna ukuba silahle iinkxalabo malunga amabhongo yayo lwemineral-rich Antarctica ngoMvulo, negosa esithi Beijing akanayo izicwangciso ukuqala lwemigodi welizwekazi. ETshayina imisebenzi owandayo kwimimandla polar i yinqontsonqa njengoko Beijing lokusindleka intlanganiso yonyaka ye-Antarctic T ... Funda ngaphezulu »
Argentina Kwathi komthetho wezimbiwa entsha kule veki
ixesha Post: May-10-2017
Abasemagunyeni Argentina, abadlali shishino kunye neemanyano kulindeleke ukuba asayine le veki isivumelwano ezimayini elide ilindelwe federal ukuba nobunye imithetho ekhoyo elizweni liphela, njengenxalenye yeenzame okoko ukutsiba-ukuqala utyalo-mali kweli candelo. Olu hlanga, kanye othandwayo-zimali zemigodi, ha ... Funda ngaphezulu »
Yinto liftoff! China-eyakhelwe inqwelomoya kuthatha ukuba isibhakabhaka
I elide-elindelwe ethwele zasekhaya eTshayina C919 umphakamisi phezu moya yayo intombi e Pudong Airport International Shanghai ngoLwesihlanu. Bamalunga nama-3,000 abantu babona mzuzu yimbali ye bt le amawele-injini, moya enye-ilayini ngayo. Le projekthi C919 yasungulwa ngo-2006 ezimbini na ... Funda ngaphezulu »
SA ngokutsha isenzo imigodi utsala 131 ususela amafama, abasebenzi kunye namaqela oshishino
Abanini kunye neenkampani nokuhlola aphakathi amaqela 131 ukuba bafake iziphakamiso bexambulisana ityala labo phezu ngokutsha yangoku isenzo zemigodi South Australia kaThixo. Isithethi Mineral Resources kunye noMphathiswa Energy Tom Koutsantonis wathi: "Kanye apha, ziqukaniswe amangeniso" babeya kwenziwa esidlangalaleni kodwa ... Funda ngaphezulu »
Umthetho zemigodi; kakhulu, kakhulu emva kwexesha
ixesha Post: Apr-27-2017
Ezi zilungiso elide-olwaba kumthetho imigodi ngoku kuya kusanda zixinge zeziphoso yenkqubo kunye ngomzuzu wokugqibela-ezongeziweyo ezakuvula ukuba umngeni womgaqo-siseko. Nokuba i-Development Resources Mineral & Petroleum Act (MPRDA) Amendment Bill ipasisiwe ... Funda ngaphezulu »
Modern Mining and Iveki Technology eqala ngo Sudbury
Ngelo xesha xa kushishino lwezimbiwa liphantsi utshintsho ulwandle kubuchwepheshe kunye ezintsha, oko azange kubaluleke ngakumbi ukuba bazibandakanye ulutsha ubafundise amathuba afumanekayo kwicandelo. Lowo umyalezo ekwabelwana ngoAprili 21 ngexesha sasemini ishishini yonyaka sokukhaba Indlela ... Funda ngaphezulu »
amagosa asebupoliseni Italian ukuhamba ibetha kwi Wall Great
ixesha Post: Apr-25-2017
Amagosa ezisibhozo amapolisa Tshayina kuhamba ekuthiwa eItali ekuqaleni kukaJuni ukunceda oogxa babo Italian ukukhusela abakhenkethi Chinese, igosa lamapolisa eliphezulu wathi ngoMvulo. Amadindala, ezikhethiweyo kuzwelonke kunye nobuchule Italian, uya balihambahambe iindawo ezintle eRoma, eMilan, uFlorence nelase ukuba ... Funda ngaphezulu »
Gunnedah umntu ogqiba NSW Mining Award luphumelele Young
ixesha Post: Apr-20-2017
Gunnedah i-Murray O'Keefe yi "ithi" emva kokuba ukhethe ukufumana i-NSW Mining Award luphumelele Young. Uceba Gunnedah Shire kunye nomqeshwa Whitehaven Coal wabhengezwa njengoko uphumeleleyo kwi-NSW Industry Mining and Suppliers 'Awards NSW ePalamente House ekuqaleni kwale nyanga. Enye ababini ... Funda ngaphezulu »
Australia greenlights Rio Tinto i $ 2.45bn intengiso kwimigodi amalahle Yancoal
ixesha Post: Apr-14-2017
Abasemagunyeni Australian ndimnikile Yancoal (ASX: YAL), igatha lwakwa- of China i-Yanzhou Coal Mining, ukukhanya okuluhlaza ukuya phambili ezicwangcisiweyo yayo $ 2,45 billion nokufunyanwa Rio Tinto kaThixo (ASX, Lon: prio) asethi thermal amalahle kwi Hunter Valley. I-Investment Foreign Review Board iphumeze deal, ... Funda ngaphezulu »
Fiore Exploration ukuze uqalise iphulo kusombiwa e Chile
Fiore Exploration CEO, Tim Warman, babhengeza ekuqaleni phulo zokomba kwi projekthi igolide Pampas El Peñón yenkampani eChile, nolwenzelwa umhlaba kwimeko bume zejoloji efanayo flagship El Peñón sam Yalunka kaThixo. Warman wathetha MINING.com ngenyanga wokugqibela kwi-2017 Prosp ... Funda ngaphezulu »